Ihowuliseyili i-Unisex elula Isantya esikhawulezayo isantya soMbane weBhayisikile yoMvelisi kunye noMthengisi | IIMI
Isantya se-Unisex esine-Lightweight isantya soMbane weBhayisikile
I-ECOLITE ebike yenzelwe ukonwaba, ukungakhathali ngebhayisikile yasezidolophini kunye neempawu ezisemgangathweni kuyo yonke. Inesimo esithandekayo sokuma kweDatshi kwaye inikwe amandla yi-BAFANG REAR Hub motor kunye nebhetri ehlanganiswe ngesakhelo. I-ECOLITE ekwi-Shimano Acera 7-isantya segiya elula, kunye neetektro disc brakes, ebonelela ngokulula ukuyisebenzisa, ukugcinwa okuphantsi kunye nokudibana okukhuselekileyo. Isikhundla sokumiswa, i-ergon grips kunye ne-saddle, kunye nokumiswa kwangaphambili kuthetha ukuba uya kuhamba ngokukhululeka yonke imihla. Ibhayisikile ephezulu yesixeko ezinikezelweyo, enobunzima bayo obungu-130kg, iluncedo njengomthuthi weedolophu mihla le njengoko ingumatshini wolonwabo olonwabisayo.
Inamandla iBafang Motor 36v 250w
Ibhayisekile ibaleka kwi-Shimano Acera 7-speedl gearing ekulula ukuyisebenzisa kunye nolondolozo olusezantsi. Iziqhoboshi zediski ezenziwe eTaiwan zinika amandla okumisa anokuthenjwa kunye nokubekwa nokudityaniswa kwemoto yeBafang kunye nebhetri yePowertube edityanisiweyo ihambisa uhambo olulinganisiweyo kodwa olumandla.
Amavili eKenda K-Shield
Ibhayisekile ye-Ecolite isebenzisa amavili akhuselweyo ngetekhnoloji ye-K-Shield. Ngumaleko okanye iaramid kunye namasuntswana eceramic phantsi kwendawo yokunyathela ekhusela ivili kwizixhobo zokugqobhoza kunye nokwandisa ubomi betayara.
Ibhetri ye-SAMSUNG inezibonelelo ezininzi ezinje ngezinga lokutshaja ngokukhawuleza, ubuthi obuncinci, ubuninzi bendalo, imijikelezo ephezulu yokukhupha, i-WH ephezulu, ukhuseleko olungcono kunye nolondolozo oluncinci.
I-Ecolite ixhotyiswe ngebhetri ye-8Ah / 36V (288Wh) ye-Li-ion yePolymer enamandla kwaye yomelele. Ibhetri ye-8Ah inebanga ukuya kuthi ga kwi-30km.
Ifolokhwe yokumisa ephezulu ikuvumela ukuba ungatyibiliki ngokungxama phezu kwamaqhuqhuva endleleni. Isitshixo sokutshixa esilula songa amandla xa ungadingi kunqunyanyiswa.
Ikhonkco elingaphambili elikhulu kunye ne-acera 7 freewheel enkulu ibonelela ngokushukuma kwamanzi kunye nokuhamba kakuhle ukonyuka ngesantya esiphezulu.
Egqithileyo I-36V 250W iZiko elinamandla leMoto yeBhayisikile
Okulandelayo: I-750W Amanqatha amnandi inyathelo lombane kwisithuthuthu